Mba tandremo ihany e ny aloaky ny vava !
Fa mety mandratra an'izay rehetra mihaino ;
Indrindra raha mipoapoaka sy miverina lava.
Mba dinio, sy fanteno, ary koa sain-tsaino.
Mba tandremo ihany e ny fihetsika aseho !
Eny imasombahoaka fa maro ny mpisehitra ;
Manaraka akaiky izay rehetra mety hiseho.
Tsy misy aza foronina, ka ny misy tsy arehitra!
Mba tandremo ihany e ny akanjo hanaovana !
Ho akanjo maotina tsy mandratra ny maso.
Fa raha tsy izany, dia tena ho lasa fitaovana,
Hampifaliana ny mpijanga sy ny mpanasoaso.
Mba tandremo ihany e ny fiainan-tokantrano !
Tsy ahahaka, tsy entina hatreny an-kalamanjana.
Fa ny rano raraka anie mety hampiditra angano ;
Toy ny omby mifanosika miady ao anaty kijana.
Mba tandremo ihany e ny asa iandraiketana !
Tanteraho ampanajana ho voninahitry ny tena.
Izay rehetra vita tsara tena ho fahafinaretana,
No hitondra fandrosoana sy fahaleovantena.
Mba tandremo ihany e ireo mpiara-monina !
Izay iarahanao miaina isanandro isanandro.
Fadio ny fihetsika, ny toetra mampitambolona,
Dia hisy ny fitoniana eo amin'ny andavanandro.
Sokajy : fananarana, fiainana, Fianakaviana, Fiaraha-monina